Zon'ny mpamorona sy ny fampiasam-bola any Shina Wave 2 | Galaxy Galaxy
Toetra fampiasam-bola: Vita
Lohahevitry ny lohahevitra: Action ， Crime
Misy fipoahana any Hong Kong, ilay manam-pahaizana momba ny baomba Pan Chengfeng (Andy Lau) taloha izay tsy nahatsiaro tena teny an-toerana, dia ahiahiana ho voarohirohy amin'izy ireo. Tsy afaka mandositra i Pan cheng feng raha te hahalala ny marina. Rehefa avy nifoha fotsiny ny fotoana, na izany aza, ny sakaizany Dong Zhuowen (Liu Qingyun) sy ny sakaizany Pang Ling (Ni Ni) dia nitantara taminy ny zavatra niainany roa samy hafa be dia be. ary mampisavoritaka ...
Herman Yau / The White Storm 2 (2019), The New King of Comedy (2019), totalin'ny boxe 3,91 miliara
Andy Lau / Our Times (2015), Infernal Affairs (2003), Switch (2013), Future X-Cops (2010), totalin'ny boxe 14,5 miliara
Sean Andy / The White Storm (2013), Overheard (2009), totalin'ny boxe 3.51 miliara
Ni Ni /Ny vonin'ny ady (2011),Fleet of Time(2014),birao mitentina 3,83 miliara
Shock Wave 2, polisy na gangster, manapa-kevitra ianao! Vitsy dia vitsy ny sarimihetsika ara-barotra afaka mahazo ny mahazatra, ary tena tompon'andraikitra amin'ny mpijery izy io. Betsaka ny seho lehibe sy ny vokatra manokana mampientanentana ao amin'ilay sarimihetsika, ary ny iray manontolo Ny traikefa an-tsary dia tena tsara. Manomboka amin'ny fipoahana mahery vaika izay mampiakatra ny mpihaino ho karazana fihenjanana mahazatra amin'ny sarimihetsika gangster Hong Kong. Fikafika roa, fipoahana lehibe enina, ary amin'ny fotoana fohy dia mahavariana. Hamonjy aina, fa mila mahafoy tena ve ianao hamonjy ain'olona? Pan Chengfeng dia baomba mandatsa-dranomaso amin'ny asany, very tongotra, izy dia manao fanatanjahan-tena amin'ny famerenana amin'ny laoniny Gang, rehefa nolavina ny fiovan'ny toe-tsaina. taorian'ny nandaozany ny ekipan'ny polisy niaraka tamin'ny fikambanana mpampihorohoro nanangana fivoriana, lasa mpikambana fototra ao amin'ny fikambanana mpampihorohoro. Pan Chengfeng dia notanterahina tamin'ny asa fampihorohoroana very fahatsiarovana, komandy Pang Ling avy amin'ny Dong Zhuo lahatsoratra momba ny rahalahin'ny fiainana sy ny fahafatesan'ny Raha tadidiko dia samy hafa tanteraka ny fitadidiany, bandit io, polisy io.
Fotoana famoahana: 2020-12-24
Raha mila mahafantatra antsipiriany bebe kokoa ianao dia mifandraisa aminay na avelao ny hafatra, dia hamaly izahay amin'ny voalohany.
Teo aloha: Ne Zha
Manaraka: Hugma mafana
Salama Andriamatoa Billionaire
Ilay Tany Mandehandeha